Oslo, Norway အော်စလို မြို့တော်ရဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာ ရှုခင်းတွေ – VIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » Oslo, Norway အော်စလို မြို့တော်ရဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာ ရှုခင်းတွေ – VIII
Oslo, Norway အော်စလို မြို့တော်ရဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာ ရှုခင်းတွေ – VIII
Posted by Kyaemon on Jul 15, 2012 in Education, Photography, Style & Beauty, Travel |3comments
Norway Oslo Scenery
Links လင့်ခများကိုနှိပ်ပြီး ကျန်တာကိုကြည့်နိုင်တာ
Vigelandparken, Oslo 01:22 –
ဩပရာ ပြဇာတ် အဆောက်အဦရှေ့
ယင်း စားသောက်ဆိုင်များ ကဖျော်ဖြေ ပေးတာ
Oslo Shopping Center
ဓာတ်လှေခါးနဲ့ ပွဲဈေးတန်း အရောင်းဆိုင်များ
Oslo, Norway in the summertime! [HD] – YouTube
Oslo in the summertime! Featuring: Jernbanetorget 00:30 –
Rådhusplassen, Oslo 00:47 –
Aker Brygge, Oslo 01:10 –
TIME LAPSE sunset on Oslo harbour 01:34 –
Operahuset (Opera house, Oslo) 01:40 –
Holmenkollen Ski jump, Oslo 02:06 –
T.G.I. Friday’s Aker Brygge, Oslo 02:47 –
Karl Johansgate, Oslo 03:00 –
Royal palace (Kongehuset), Oslo 03:10 –
Hard Rock Café Oslo 03:26 –
Town hall (Rådhuset), Oslo 03:33 –
Ekebergrestauranten / Ekeberg, Oslo 04:00 –
Park Inn Hotel Oslo 05:08 –
Oslo city centre sky TIME LAPSE 05:56 –
NRK Marienlyst, Oslo Opplevelser / omvisning (tour) 06:04 –
Oslo City Shopping Center 06:47 –
Byporten Shopping Center, Oslo 06:56 –
Oslo Sentralstasjonral (central station) (07:14) –
Oslo Moss Lufthavn (Airport) Rygge 07:32 //
အမျိုးသား ကဇာတ် ရုံ
Oslo Sightseeing presentation – YouTube
သင်းဘောက အော်စလို မြစ်ဆိပ် သို့ဆိုက်ရောက်လာပြီးနောက်တော့ ဘာလုပ်ကြမလဲ?
မြို့ရှုခင်းတွေကြည့်ဘို့ Solvor Wold က ဗီဒီယိုနဲ့တင်ပြသွားတာ
A Sightseeing presentation of Oslo in Norwegian with Solvor Wold.
Cruise ship arrival. What to do in Oslo.
ဒီပိုစ့်ထဲမှာ ၃ခါတိတိမြင်ရတဲ့ ဆံဝါလေးက လန်းတယ်
အမယ်လေးကြေးမုံဂျီးရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်သူ ပြည်နယ်သားတွေ ဘဝကို နည်းနည်းလောက် စာနာဗာအုံး…။ ပိုက်ဆံသိပ်မက်ရင် မြစ်ဆုံရေကာတာ မဆောက်ပါနဲ့..ကြောင်ကြီးကို အပိုင်သိမ်း အဆီကိုစား အသားကိုမျို အရေကိုဆုတ် အရိုးကိုထွင် အမွှေးကိုချွတ် အမြီးကိုဖြတ် စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကိုတော့ ချမ်းသာပေးပါ။
ရေလှောင်ကန် ပြိုကျ၍ ဖားကန့်တွင် ရေကြီး။။။။။။။။။။။။
ဖားကန့်မြို့နယ် နမားယန်ချောင်း အနီးရှိ ဆမား ရေလှောင်ကန် ပြိုကျမှုကြောင့် ကုဋေမှော် ကျေးရွာ အပါအ၀င် မြို့ပေါ် ရပ်ကွက် အချို့ ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းဒေသခံများက The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
“ ရွာထဲကို ချောင်းရေက အရှိန်နဲ့ ၀င်လာတာ ။ အိမ်ခြေ ၂၀လောက် မြုပ်သွားတယ် ကုဋေမှော် ကျေးရွာရှိ ကျောက်စိမ်းဝယ်ရောင်း လုပ်ကိုင်နေသူ အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဆမားရေလှောင်ကန်သည် မိုးသည်းထန်စွာ လေးရက်ခန့် ရွာသွန်းပြီးနောက် ဇူလှိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ ၁၁ နာရီအချိန်တွင် ပြိုကျခဲ့ပြီးနောက် ရေတက်နေသော နမားယန်ချောင်း အတွင်းသို့ ရေလှောင်ကန်ရေများ ၀င်ရောက်ခြင်းကြောင့်ရုတ်တရက် ရေကြီးသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဒေသခံတို့က တူညီစွာ ပြောဆိုကြသည်။
ဖားကန့်မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်ဖြစ်သော ငပျောတော ရပ်ကွက်တွင်းလည်း မြေနိမ့်ပိုင်းအချို့ ရေလျှံမှု ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး ယင်းမြို့၏ အထင်ကရ ကျောက်ဝိုင်း နေရာတွင်လည်း လမ်းပေါ် ရေကျော် လျက်ရှိကြောင်း ၄င်းတို့က ပြောကြားသည်။
ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီး ရေမကြီးပါဘူး။ စိုးရိမ်စရာ မရှိဘူး ဖားကန့်မြို့ငှက်ပျော်တော ရပ်ကွက်ရှိ အထက်တန်း ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ဖားကန့်မြို့သည် ယခုနှစ်တွင် နယ်မြေ လုံခြုံရေး အခြေအနေများကြောင့် ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များ ရပ်နားထားသည့် အတွက် လက်ရှိ ကာလတွင် နှစ်စဉ်ဖြစ်ပွားနေသော စံချိန်တင် ရေကြီးမျိုး ဇူလှိုင်လအထိ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဒေသခံတို့က ပြောကြားသည်။